Jurgen Klopp oo ka jawaabay wararka Liverpool la xiriirnaya Kylian Mbappe iyo Jadon Sancho – Gool FM
Jurgen Klopp oo ka jawaabay wararka Liverpool la xiriirnaya Kylian Mbappe iyo Jadon Sancho
Dajiye May 5, 2020
(Liverpool) 05 Maaajo 2020. Muddooyinkii u dambeeyay waxaa soo if baxayay warar kooxda Liverpool la xiriirinaya la soo saxiixashada qaar ka mid ah xiddigaha loogu doonista badan yahay suuqa kala iibsiga gaar ahaan Kylian Mbappe iyo Jadon Sancho.
Macallinka Liverpool ee Jurgen Klopp ayaa albaabada u furay in kooxdiisa ay la soo wareegi karto Mbappe iyo Sancho, balse waxa uu diiday inuu caddeeyo bartilmaameedyada suuqa xagaagan.
“Waxaan aad ugu faraxsanahay wiilasha aan heysto, marnaba kama aanan fikirin ciyaartoy kale” ayuu Klopp u sheegay beIN Sports.
“Marka aan koox ku suganahay kaddibna aan la shaqeynayo ciyaartoyda aan heysto, kuma riyoodo xiddigo kale. Haddii aan heli karno mid ka mid ah waan arki doonaa, balse waxaan natiijada ugu wanaagsan ku sameyn doonnaa xaaladda aan heysanno.” ayuu macallinka Liverpool hadalkiisa ku sii daray.
Dhanka kale, hoggaamiya Jarmalka ka soo jeeda ayaa beIN Sports ay weydiisay mustaqbalka Sadio Mane iyo Mohamed Salah, xilli dhowr jeer lala xiriiriyay inay Reds ka tagi karaan, waxaana uu ku jawaabay inay dhowr sano ka sii mid ahaan doonaa safka kooxda ka dhisan garoonka Anfield.
Sergio Ramos oo bartay xirfad cusub intii lagu gudo jiray karaantiilka
Go'aanka Barcelona ee suuqa kala iibsiga oo ku jira gacanta Mauricio Pochettino... (Sidee?)